Ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny fahasalamana no nanatitra izany tany an-toerana ny 25 aprily 2020 lasa teo. Toy ireo faritra hafa manerana ny Nosy dia anisan'ireo nahazo ny anjara fampitaovana mikasika ny fiatrehana sy fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ihany koa ny faritra Ihorombe. Efa tonga any an-toerana ireo fitaovana ho entin'ny mpiasan'ny fahasalamana miatrika izao valanaretina izao. Tonga soa aman-tsara ihany koa ireo fitaovana hoentin'ny mpiasan'ny fahasalamana ho an’ny faritra Vakinankaratra. Tsy diso anjara ihany koa ny tany amin’ny Faritra Sofia.